तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज १७ गते, बुधबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज १७ गते, बुधबार।
धार्मिक असोज १७ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल असोज १७ गते। बुधबार। इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर ३ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष।
परिस्थितिवश चिताएको काममा केही बाधा हुनेछ। व्यवसायमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। तत्काल ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला। अपराह्नदेखि शुभचिन्तकहरूको साथले स्थितिमा सुधार आउनेछ। सेवामूलक कामबाट उपलब्धि प्राप्त हुनेछ।
बलजफ्तीले लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्ने हुँदा बुद्धिको उपयोगले काम लिने चेष्टा गर्नुहोला। आत्मसम्मानका लागि मौन रहनु बेस होला। व्यवहारले समेट्न नसक्दा शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन्। अपराह्नतिर गोपनीयतामा विशेष सजग रहनुहोला। प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर ठान्दा++ व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ।वचनमा संयम रहँदै गरिएको युक्तिपूर्ण व्यवहारले फाइदा दिलाउनेछ।
व्यवधानका बीच नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू थोरै हुनेछन्। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको अवसर प्राप्त हुनेछ। कामको चाप बढे पनि पहिलेको सफलताले हौसला प्रदान गर्नेछ। अपराह्नदेखि न्यायका लागि सजग रहनुपर्ला। आफ्नो स्वामित्वका वस्तुमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ।
प्रतिस्पर्धाले कर्मयोगको मार्गमा अग्रसर गराउने हुँदा फाइदा हुनेछ। छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। केही खर्च लागे पनि लामो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। लगानी बढाउनुपरे पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ।
श्रमलाई सजिलै रकममा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। व्यापार तथा साझेदारीमा मनग्गे लाभ हुनेछ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। अपराह्नतिर व्यवसायमा लागत बढ्नेछ भने अनियन्त्रित खर्चले मन पिरोलिन सक्छ। पछिका लागि केही त्याग गर्नुपर्ला। बलजफ्तीले काम रोकिन सक्छ।
पुराना कामको चर्चा भए पनि प्रतिस्पर्धाको दौडमा पछि परिनेछ। आफ्नैले काममा बाधा पुर्याउन सक्छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न समय लाग्नेछ। अवसरवादीहरूले कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। अपराह्नदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले काम बनाउन सकिनेछ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले विशेष लाभ दिलाउनेछ।
समय चुनौतीपूर्ण देखिए पनि लगनशीलताले अवसर दिलाउन सक्छ। श्रम परे पनि तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। धर्मकर्म तथा सेवामूलक काममा प्रवृत्त भइनेछ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। अपराह्नतिर स्थिति केही कमजोर रहला। बलजफ्तीले काम बिग्रनेछ भने आँटले काम लिन नसक्दा पछि परिनेछ।
परिस्थिति अनुकूल नदेखिए पनि शुभचिन्तकहरूको साथले जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। मिहिनेत गर्दा लगानी उठाउन सकिनेछ। आम्दानी कमजोर हुनाले कर्जा लिनुपर्ला। साँझतिर पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। परिस्थितिवश योजना सम्पन्न गर्न समय लाग्नेछ। अवसरका विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। लगनशीलताले काम बन्नेछ।
मनोरञ्जनमा अलमलिँदा लक्ष्यमा बाधा पुग्नेछ। निम्तो प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। रमाइलो क्षणमा पनि मन उदास रहनेछ। साँझतिर असहज परिस्थितिका बीच काम बनाउन सकिनेछ। शुभचिन्तकहरू जुट्नाले नसोचेको काम बन्न सक्छ। वादविवादबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला।
अवसर आए पनि अधिकारका लागि सजग रहनुपर्ला। वैधानिक प्रावधानले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पार्नेछ। आफ्नै सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिने समय रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। यात्रा गर्दा धनमाल सुरक्षामा ध्यान दिनुहोला। साँझतिर कामको वातावरण बन्नेछ। मिहिनेत गर्दा जिम्मेवारी पाइनेछ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले फाइदा दिलाउनेछ।
अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। समस्या दर्साउँदा साथीभाइले साथ दिनेछन्। कृषि र पशुधनबाट लाभ हुनेछ। सहयोगीका माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ। साँझतिर विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। हल्लाको पछि लाग्दा बित्थैमा दु:ख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।